အလူးအလဲခံနေရတဲ့ ရန်ကုန်ကို သင်ခန်းစာယူပြီး ကြိုပြင်ထားသင့်တဲ့ နယ်မြို့တွေ - Zet Star
အလူးအလဲခံနေရတဲ့ ရန်ကုန်ကို သင်ခန်းစာယူပြီး ကြိုပြင်ထားသင့်တဲ့ နယ်မြို့တွေ
နယ်မြို့များရှိ… ပညာတတ် လူငယ်များသို့.
တတ်သိနားလည်တဲ့ သူတွေဟာ.. သူတို့အတွေ့အကြုံ တွေ.. သူတို့ ရဲ့ သင်ကြားလေ့ကျင့်ထားတဲ့.. ပညာတွေကြောင့်.. တွေးဆပြီး….ကြိုမြင်ကြပါတယ်. စက်တင်ဘာမှာ ဒုတိယလှိုင်း ဆိုတာ… ကြိုပြော ကြတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်… သူတို့ဟာ ဗေဒင်တွေယတြာတွေကြောင့် ကြိုသိနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး… ဒါမျိုးလုပ်ရင်…ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်…. ဒီလို အခြေအနေအတိုင်းသွားရင်.. ဒါတွေ ဖြစ်လာမယ် ဆိုပြီး… ကြိုတင်တွက်ဆ ခဲ့ကြတာပါ…
အဝေးကြီး က စမပြောပါဘူး.. ဒုတိယလှိုင်းလေး ကပဲ.. စပြောပါမယ်… အိန္ဒိယ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ လူနာတွေ တစ်အားများလာတဲ့အခါ… အနောက်တံခါးကို စိုးရိမ်ပါတယ်. စိုးရိမ်တဲ့အတိုင်း အနောက်တံခါး ပွင့်ပါတယ်… စစ်တွေ စပြီ ဆိုတာနဲ့ ..ရန်ကုန် ဟာ…မကြာခင်မှာပဲ အလုံးအရင်းနဲ့ အဆောင့်ခံ ရမယ် ဆိုတာ.. ကြိုတင်တွက်ဆ ထားကြပါတယ်.
ကြိုပြောကြ ပါတယ်… သတိပေး ကြပါတယ်..လိုက်နာ တဲ့ သူတွေ ရှိသလို… မလိုက်နာတဲ့ သူတွေ လည်း တော်တော်လေးများခဲ့ပါတယ်…. အမှားလေး တစ်ခုလောက် ကျူးလွန်မိယုံနဲ့… အခြေအနေ တွေဟာ..ရုတ်ချည်း..လင်းရာကနေ မှောင် သွားသလို အဖြစ်မျိုးတွေ… အများကြီး….ကြုံ ရနိုင်ပါတယ်.
မမှားနိုင်တဲ့ လူသားတွေ မဟုတ်သလို… ကပ်ရောဂါတွေကို..ရင်ဆိုင်ဖူးတဲ့ လူသားတွေ လည်း..မဟုတ်တာကြောင့်..အထိနာရပါတယ်. အခု လူးလိမ့်နေအောင်…ခံကြရပါတယ်.. ဘယ်သူမှ အပြစ် မဆိုသာပါဘူး. ခံ ကြရ ရင် အားလူံးတူတူပါပဲ… ကျနော်တို့ ရန်ကုန် အဖြစ် ကို… နယ်မှာ ရှိနေတဲ့….. ပညာတတ်လူငယ်များ မြင်အောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်.
ကြည့်လို့ မြင်ခဲ့ရင်. အိမ်က လူကြီးတွေကို.မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို.. အနည်းဆုံးတော့ မိမိအိမ်သားတွေကို… လူစုလူဝေးနေရာတွေကို.. မသွားဖြစ်အောင်တားပေးကြပါ. ပါတီစည်းရုံးပွဲတွေ… ဘုရားပွဲတွေ… ထီးတော်တင်ပွဲတွေ… အခြားသော ဘာသာရေး ဝတ်ပြုဆုတောင်းမှုတွေ… ဘယ်နည်းနဲ့မှ လူစုလူဝေးနေရာတွေကို မသွားဖြစ်အောင် ပြောဆိုပေးစေချင်ပါတယ်…
ဒီနည်းနဲ့ အိမ်က လူတွေ အသက်ကို… ကယ်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်.. ရန်ကုန်ဟာ.. လော့ဒေါင်းလုပ်ပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ… ပြန်လည် နိုးထ လာပါလိမ့်မယ် အဲ့အချိန်မှာ နယ်တွေအတွက်..အိမ်မက် ဆိုးတွေ မက်လာနိုင်ပါတယ်… မိမိနယ်မြေ အခြေအနေကို စဥ်းစားကြည့်ပါ… ဆေးရုံနေရာတွေ လူအင်အားတွေ အသက်ရှူ စက်တွေ ဘယ်လောက်များ နေလို့ လဲ
ဖြစ်လာရင် နယ်ကျော်မရ ဆိုတဲ့အခါ….. ငုတ်တုတ်ခံ ရမှာပါ.. ရန်ကုန် လို တော်တော်လေး ပြည့်စုံနေတဲ့… အခြေအနေ မှာတောင် လူးလိမ့်နေအောင် ခံရတာပါ… နယ်မြို့တွေ..ဆို မလွယ်ပါဘူး စစ်တွေ ဖြစ်ချိန်မှာ ရန်ကုန်ကို ပိတ်တယ်.. မမှီပါဘူး.. ရန်ကုန်ဖြစ်ချိန်မှာ….မန်းလေးကို ပိတ်တယ်… မမှီပါဘူး.
အဲ့လို မြို့ကြီးတွေ ဖြစ်ချိန်မှာ နယ်ကို ပိတ်လိုက်တယ် ဒါပေမယ့် မှီမယ် မထင်ပါဘူး ရောဂါပိုးဟာ. ကြိုတင်ပြီး ရောက်ရှိနေပြီးသားပါ… ကျနော်တို့ ပြောတာ ယုံပါခမျာ… ရန်ကုန်ကို ကြည့်ပါ. ပြီးရင်.အိမ်မှာနေပါ.. ပညာတတ် လူငယ်များကို.အားကိုးပါတယ် ခမျာ. ဝိုင်းဝန်းထိမ်းသိမ်းပေးကြပါ.
← ကိုဗစ်အမြန်စစ်ကိရိယာနဲ့ စစ်ခဲ့ရသူတဦး ပြောပြတဲ့ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံ
ကမ္ဘာ့အသက်ကြီးဆုံး အမျိုးသမီးထက် ၁၀ နှစ် ပိုကြီးတဲ့ မြန်မာပြည်က အဘွားဒေါ်ထွေး →